वैयक्तिक निबन्ध – Page2– मझेरी डट कम
तोल्स्तोईको कथा र बुच्चे काकाको भाग्य
तोल्स्तोई बूढाको एउटा मार्मिक कथा छ । कथामा मृत्युको देवताले एकदिन आफ्नो दूतलाई पृथ्वीमा पठोउँछन् । एउटी आइमाईको मृत्यु हुनेवाला थियो । तिनको आत्मालाई लिनाको लागि देवदूतलाई पठाइएको थियो । देवदूत ती महिलाको लाश वरिपरि विजोग भएका नानीहरुको अवस्थाले हड्बडाउँछन् । एउटी सानी बच्ची लाश भएकी आमाको दूध चुसिरहेकी थिई । एउटी बच्ची रोइरहेकी थिई । अर्की बच्ची रुँदारुँदै त्यहीँ निदाएकी थिई । ती अबोध नानीहरुलाई हेरचाह गर्ने, माया दिने कोही थिएनन् । उनीहरुका बुबा पहिले नै मरिसकेको थियो ।
जीवनमा साना साना कामहरुको ठूलो महत्व हुँदोरहेछ । मुटु रोगका सर्जन डा. भगवान कोइराला हिजो टि.भी.मा भन्दै थिए– सानो सानो कामबाट ठूलो काम बन्छ । उनको भनाइमा मेरा पनि धेरै चिन्तन सूत्रहरू मिले । वास्तवमा समग्र रुपमा थोक कार्य काहीँपनि हुँदैन । साना साना कार्यहरुका गठजोडबाट ठूला कार्य बन्दा रहेछन् । विशाल पहाड हेरौँ, साना साना धुलीकणहरुको योगबाट नरि्माण भएको छ । सीमाहीन समुद्र हेरौँ, थोपाथोपा पानीबाट निर्मित भएको छ । हजारौँ गजकपडाको बण्डल हेरौँ सानो केसभन्दा मसिनो धागोबाट बुनिएको छ । महाभारत र रामायण विश्वका धेरै श्लोक भएका महाकाव्य मानिन्छन् । महाभारतका प्रत्येक श्लोकहरू साना साना शब्दबाट, साना साना रुपबाट, साना सानाअक्षर, वर्ण र सूक्ष्म ध्वनिहरुबाट रचना भएका छन् । यसरी सानो चिजबाटै ठूलो चिज बन्नेरहेछ, सानो कामबाटै ठूलो काम बन्नेरहेछ ।
घर सुनसान छ । आजबाट यस घरमा एक प्रकारको शून्यताले राज गरेको छ । जसरी बचेराहरू गुँड छाडेर उड्छन् र त्यहाँ शून्यता छाउँछ; त्यस्तै भएको छ मेरो घर । दुइटा बचेराहरू उडेर गए, आजबाट गुँड शून्य भयो । बचेराहरू उडेपछि माउको हृदयमा जुन शून्यताको, खिन्नताको घाउ लाग्छ । त्यही घाउ लागेको छ मनमा । बचेराहरू उडिगएपछि बच्चासँग गाँसिएका अनेकौँ सन्दर्भहरू विस्मृतिको गर्भबाट फटाफट बाहिर आए । अतितको त्यो मृदुल स्मृतिमा डुब्दा अनयास आँखामा आँशुको दह जम्यो । छोराछोरीसितको सन्निध्यता टुटेको छ आजबाट ।
मलाई कहिलेकाहीँ अपूर्वको तिलस्मी भावले छुन्छ । त्योघडी म अर्कै मान्छे हुन्छु । मेरो मनमा अभाव भन्ने वस्तु हुन्न, म भावैभावको तरल प्रवाहमा पौडेको हुन्छु । यसरी तिलस्मीभावले गाँजेको बेला म अकारण आनन्दमा लठ्ठिएको हुन्छु । त्योक्षणमा आनन्दित हुन मलाई कुनै विषय, बाहना र वस्तुको दरकार पर्दैन । भित्रबाट अप्रतिम आनन्दको तुमूलधुन मडारिएर आउँछ । सायद बुद्धभित्रको अखण्ड बोधिसत्व यस्तै रुपको होला । यस्तै आकार र अनुभूतिमा सीमाहीन भएर फैलिएको थियो होला ।
आजभोलि कतिपय मान्छेका कुराहरूलाई चाल्नो लगाएर सुन्न थालेको छु । चाल्नो नलगाई सुन्दाखेरि आफ्नो अन्तःप्रदेशमा झ्यासपत्कर छिर्ने संभावना प्रवल भएर गएको छ । खास गरी राजनीतिक वृत्तका बकमफुसे नेताका कुरालाई चाल्नो लाएर सुन्नु परेको छ । बोल्नेले सयकडा असीपचासी प्रतिशत कुराहरू भुस बोलेपछि चामलका गेडा खोज्न चाल्नी लगाउनैपर्ने बाध्यता आएको छ ।
मानिसको चित्त चञ्चल हुन्छ । यो चञ्चले चित्त स्थिर रहन मान्दैन । यो चञ्चल मात्र हुने होइन, अशुद्ध पनि हुन्छ । त्यसैले यसको शुद्धिकरणको निमित्त हामी प्रार्थना पनि गर्नेगछौँ । यो चञ्चल किन हुन्छ ? हामीलाई थाहा छैन । मनोवैज्ञानिकहरू भन्छन्— स्वाभाविक प्रकृया हो । ‘हुन्छ’। ‘किन चञ्चल हुन्छ ?’ प्रष्ट उत्तर पाइँदैन । दार्शनिकहरू भन्छन्—चञ्चले चित्तलाई नियञ्त्रण गर्नु पर्दछ । यसलाई स्वतन्त्र र छाडा छोडी दिन हुँदैन । यसले आदर्शतिर शंकेत गर्दछ र भन्छ— ‘चञ्चलता नियणगर्नु पर्छ’ । तसर्थ चित्त नियञ्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा गरिने विचार तर्क र अभ्यास दर्शन शास्त्रको एउटा अंश हुन जान्छ ।